Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu - Wikipedia
Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu
Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu libandla elizimeleyo ela sekwa kwidolophu yase Beijing, e China ngonyaka ka 1917. Namhlanje elibandla linamalungu azizigidi ezingamashumi amabini anesihlanu kumazwe angamashumi amane anesine. Lenkonzo yase Pentekoste yosindiso yaqalwa ngeminyaka yokuqala kwi twentieth century. Ngonyaka ka 1997 lenkonzo iye yavulwa kweli loMzantsi Afrika. Unobangela ikuvakalisa indaba ezilungileyo kwilizwe lonke ngaphambi kokubuya kuka yesu okwesibini.
Inkolo ezilishumi zalenkonzo zithi:
Umoya Oyingcwele: Kokufumana uMoya oyiNgcwele, kungqinwa ukuthetha ngeelwimi, ke usisiqinisekiso selifa lethu yobukumkani bamazulu.
Ubhaptizo: Babhaptizwe ngamanzi umthendeleko ukuze kuxolelwe izono ngokutsha. Ubhaptizo kufuneka kwenzeke emanzini aphilileyo zendalo, ezifana emlanjeni, ulwandle, okanye umthombo. Umbhaptizi, osele uye wamkela ubhaptizo ngamanzi nanguMoya oyiNgcwele, uqhuba ubhaptizo egameni leNkosi uYesu Kristu. Ke umntu ofumana ubhaptizo kufuneka ukuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini kunye nentloko baguqa ngobuso.
Ukuhlanjwa kwenyawo: Omnye Umthendeleko ye ukuhlanjwa kweenyawo yenza ukuba babe yinxalenye kunye neNkosi uYesu. Kananjalo ikwanceda njengesikhumbuzo rhoqo ukuba umntu kufuneka abe nothando, ubungcwele, ukuthobeka, ukuxolela, nenkonzo. Wonke umntu ofumene ubhaptizo amanzi kumele ukuba ndizihlambile iinyawo zabo egameni likaYesu Krestu. Mutual ukuhlamba unyawo no kwenziwa xa kufanelekile.
Umthendeleko Ongcwele: I-Tendeleko ungcwele ke umthendeleko bekukhunjulwa ukufa kweNkosi uYesu Krestu. Oku kusinceda ukuba badle inyama negazi leNkosi yethu size sibe ngamadlelane kunye naye ukuze babe nobomi obungunaphakade aze avuke ngomhla wokugqibela. Le Umthendeleko uya kubanjwa rhoqo kangangoko kunokwenzeka. iya kusetyenziswa kuphela izonka ezingenagwele incindi yeediliya.
Umhla weSabatha: Umhla wesabatha, usuku lwesixhenxe lweveki (uMgqibelo), lusuku ongcwele, wabasikelela wazingcwalisa nguThixo. Kubalulekile ukuba luqwalaselwe phantsi ubabalo weNkosi ngenxa kwisikhumbuzo indalo kaThixo nosindiso, kwaye ngethemba yokuphumla ngonaphakade buza kubakho.
Uyesu Krestu: UYesu Kristu, iLizwi owaba yinyama, wafa emnqamlezweni okuhlawulela aboni, wamvusa ngomhla wesithathu, yaye wanyukela ezulwini. Nguye kuphela uMsindisi woluntu, uMdali wezulu nomhlaba, yaye uthixo oyinyaniso.
Izibhalo Ezingcwele: IBhayibhile engcwele, ebandakanya iTestamente Endala kwiTestamente eNtsha, iphefumlelwe nguThixo, inyaniso yeZibhalo kuphela, kwaye umgangatho wokuphila yamaKristu.
Usindiso: Usindiso babenikelwe khona elubabalweni lukaThixo ngokholo. Amakholwa kufuneka sithembele uMoya oyiNgcwele ukuba balandele ubungcwele, ukuba uyamhlonela uThixo, ukuba umthande uluntu.
Inkonzo: Lenkonzo enyanisekileyo ka Krestu, yasekwa ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu, ngoMoya oyiNgcwele ebudeni bexesha 'nemvula evuthisayo', ibandla ebuyiselweyo okwenyaniso ngexesha labapostile.
Umhla womgwebo: UKuza lesiBini uYesu uza kuqhubeka ngomhla wokugqibela xa kuhlela ezulwini kuligweba ihlabathi:. Amalungisa aya kufumana ubomi obungunaphakade, Xa ongendawo uya ngonaphakade kugwetywa.
Retrieved from "https://xh.bywiki.com/w/index.php?title=Lenkonzo_enyanisekileyo_ka_Krestu&oldid=26404"
This page was last edited on 20 Eyo Mdumba 2016, at 23:02.